I-Recipe yama Witches ye-choir ye-flute eneempembelelo ezizodwa - I-Catalogue yoMculo kaDavid Warin Solomons
ikhaya / I sixhobo / Woodwind / Umgqomo / IiKhowudi eziPhupha / I-Recipe yama Witches ye-choir yomsindo kunye nemiphumo ekhethekileyo
Udidi: IiKhowudi eziPhupha
Njengokuba ifunwa yinkokheli yecyriti yombhobho, nantsi inguqu ephezulu ye-Witches 'Recipe eneempembelelo zongeziweyo (i-wind wind blowing, iilwimi zolwimi ezimele izithako eziphambili kwi-cauldron njl. 'kucula.
Ngesithathu ikati edibeneyo ine mewu.
Kwesithathu kanye kanye, i-hedgepig i-whin'd.
Ukulila: - 'ixesha! ixesha!
Ujikeleze malunga ne-caul -ron;
Ukukhukhuza, ukuba ilitye elibandayo,
Iintsuku nobusuku zinamashumi amathathu;
Yibilise kuqala kuqala i-pot!
BONKE. Umbini, usebenza kabini kunye neengxaki;
Ukushisa komlilo, kunye ne-cauldron bubble. (njl) "
(Ndaphinda ndongeze intlonelo yentsapho ngokuhlukumeza uShakespeare: I-Hubble bubble nzima kunye neengxaki, utywala kwaye ndiza kubini!)
ngokutsha 1 ngenxa I-Recipe yama Witches ye-choir yomsindo kunye nemiphumo ekhethekileyo
Janice Spooner - Aprili 21, 2019
Sasiyifumene i-choir yomsindo kwaye sasithanda. Siyenzele iHalloween ngo-Agasti kwi-NFA kwaye ngo-Oktobha olulandelayo senze loo ngcelele ye-Halloween. Oogqirha bethu babenxiba iihayi zeenkozi ukuze wonke umntu ayazi ukuba siphi na. Omnye wethu unomdla, enye yayisigxina, kwaye enye imfihlelo.
Umphefumlo wam, kukho ilizwe le-quartet yesigubhu okanye i-choir yomsindo
Umlambo - i-choir yomsindo kunye nehadi
I-Recipe ye-Witches for Choir Flute Umnyhadala woNyaka weTshayina we-choir yomsindo
I-Londonderry emoyeni (Oh ​​Danny Boy) kwiigulane negitare ze-2
I sixhobo (4,283)
Ubukela: I-Recipe yama Witches ye-choir yomsindo kunye nemiphumo ekhethekileyo